Ngwa - Bulltech
Bụrụnụ ndị na-ere ahịa? Kpọtụrụ anyị: info@bulltech3d.com
Ihe obibi 3D nwere ike inye ndị ọrụ akụkụ ikpeazụ na ụbọchị ole na ole iji nyochaa echiche imewe ahụ, ma ọ bụ tinye ha n'ọrụ, ma mekwaa oge iji zụọ ngwa ngwa karịa ndị na-asọmpi. Teknụzụ obibi akwụkwọ 3D na-arụ ọrụ dị oke mkpa na usoro mmepụta. Ọ nwere ike ịnweta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, wee jiri ụdị ahụ maka nrụpụta ngwa ngwa. Usoro a na-agbanwe ma na-arụ ọrụ nke ọma, na-ebelata ọnụ ahịa nke ịkpụzi na mkpofu mkpofu, nweta ngwaahịa na obere oge, na-enweta ọtụtụ utịp.
Obere Ogbe Production
3D-ebi akwụkwọ obere ogbe mmepụta nwere ọtụtụ uru: elu mgbanwe, ngwa ngwa obibi akwụkwọ, ọnụ ala, elu nkenke, na ezi elu mma. Ọ dabara adaba maka obere mmepụta nke ngwaahịa dịka nka, okike ọdịnala, ihe nkiri na ihe nkiri telivishọn, yana akụkụ akụrụngwa. Ọ na - emeri nsogbu nke ụgwọ dị elu, arụmọrụ dị ala, na ejighị n'aka nke sitere na nrụpụta ọdịnala dịka akwụkwọ ntuziaka, CNC, ịkpụzi ọgwụ.
3D ngwa nbipute nwere ike nweta ngwa ngwa prototyping nke e ji mee ihe maka nkwenye ọdịdị, nke a dị ezigbo mkpa na mmalite mmalite nke imepụta ngwaahịa ụlọ ọrụ. Itinye data 3D n'ime ihe nbipute 3D nwere ike ibipụta ụdị ngwaahịa akụkụ atọ, na-eme ka imepụta ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ. 3D ebi akwụkwọ technology nke ukwuu ebelata n'ichepụta oge, n'adịghị ka omenala na-emeghe-ebu n'ichepụta ma ọ bụ aka mere, ọ nwere ike ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè na-enyere ụlọ ọrụ chọta ngwaahịa imewe ntụpọ na mmalite ogbo.
Nkwenye nhazi gụnyere nkwenye nzukọ na nkwenye ọrụ. Ọ nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ngwaahịa ahụ iji chọpụta ma imepụta ngwaahịa ahụ ọ dabara adaba yana nnwale arụmọrụ nwere ike izute mkpa ngwaahịa ahụ. Ojiji nke 3D na-ebi akwụkwọ technology nwere ike mee ngwangwa ngwaahịa mmepe okirikiri na zere nsogbu nke ogologo oge na elu na-eri n'ihi na ebu oghere.
Na usoro imepụta ọdịnala, itinye ego na mmepe nke ebu nwere nnukwu ego maka ụlọ ọrụ, na ngosipụta nke teknụzụ obibi akwụkwọ 3D na-eweta ụzọ mkpirisi na ụlọ ọrụ ngwa ọrụ ụlọ. Site 3D ebi akwụkwọ ngwangwa prototyping, R&D engineer nwere ike ngwa ngwa tọghata atọ-akụkụ nlereanya data e mere site na kọmputa n'ime ezigbo ihe. Usoro a ji okpukpu iri karịa usoro mmepụta ọdịnala. 3D ebi akwụkwọ technology na-bụ-eji na ngwaahịa proofing na ngwaahịa mmepe ogbo, dị ka ngosipụta ọdịdị, nkwenye nzukọ, na obere ogbe mmepụta. Ọ na-ebelata ebu na-akwụ ụgwọ na usoro ọrụ niile, na-ebelata oge mmepe ngwaahịa ma na-agba ọsọ ọsọ nke ngwaahịa ọhụrụ. Site na mmelite nke ihe onwunwe na mmelite nke teknụzụ obibi akwụkwọ 3D, teknụzụ obibi 3D ga-etinyekwu aka na mmepụta akụkụ ikpeazụ nke ngwa ngwa ụlọ. N'ọdịnihu, teknụzụ obibi akwụkwọ 3D ga-etolite na ngwaahịa buru ibu.
3D obibi na-enye ihe magburu onwe ngwọta maka nkenke Medicine. Teknụzụ mbipụta 3D nwere ike ịmepụta ụdị akụkụ atọ dabere na data CT ma ọ bụ MRI nke onye ọrịa, wee bipụta ụdị ikpe ahụ site na onye nbipute 3D, ma nweta ngwa ngwa ahụike na obere oge. A na-eji ya na nyocha na usoro ịwa ahụ iji mezuo ebumnuche nke imepụta anya, arụmọrụ pere mpe nke ukwuu, nwughari nke onwe ya na ọgwụgwọ zuru oke. Teknụzụ obibi akwụkwọ 3D na-enye ndị dọkịta nwere ọgụgụ isi na ịmatacha usoro ịwa ahụ na ịwa ahụ, nke na-eme ka ịwa ahụ zuo oke ma belata ihe egwu nke ịwa ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, uru nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D maka ahụike maka insoles orthopedic, aka bionic, ihe enyemaka na ngwaọrụ ndị ọzọ abụghị naanị ahaziri, kamakwa ọ na-egosipụtakwa ngbanwe nke usoro mmepụta ọdịnala site na teknụzụ teknụzụ dijitalụ ziri ezi na nke ọma. mmepụta usoro ma hụ na ị nweta ngwaahịa n'oge kachasị dị mkpirikpi.
Typesdị smart. A 3D ebi akwụkwọ nwere ọgụgụ isi data usoro pụrụ iche maka ezé, nke integrates akpaka typesetting na-agbakwunye ọrụ nkwado, akpaka layering, na-akwado WiFi nnyefe nke faịlụ, na ike na-akwado otutu 3D na-ebi akwụkwọ n'otu oge;
Humanized imewe. Usoro Bulltech nke 3D usoro obibi akwụkwọ nwere obere akụkụ, ọrụ dị mfe na mgbanwe dị elu, kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ọrụ ọ bụla;
Nchedo gburugburu ebe obibi. Usoro nnwere onwe na ịgwọ ọrịa nke onwe na-eme ka usoro ọrụ dị mfe dị ka o kwere mee site na nchịkọta na ịdebe pallet na-ebi akwụkwọ, njigide nke resin vat na nhicha nke residues, nke na-arụ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi.
Complete dijitalụ ngwọta. Site CAD imewe ka 3D ebi akwụkwọ okokụre ngwaahịa, Bulltech nwere a zuru ezu usoro nke 3D ebi akwụkwọ ngwọta, aiming iji ọkachamara 3D ebi akwụkwọ technology ịgbanwe eze nhazi ụzọ, kọwaa ụkpụrụ ụkpụrụ nke dijitalụ 3D ebi akwụkwọ na dentistry, na-arụpụta ihe kasị mma na-atụ anya.
Ngwa nke teknụzụ obibi akwụkwọ 3D na imepụta akpụkpọ ụkwụ, nyocha na mmepe, na ịkpụpụta mgbatị bụ ihe tozuru oke. Ka ọ dị ugbu a, Bulltech 3D mbipụta teknụzụ na-agbanwegharị ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ. Ọ dị ngwa, rụọ ọrụ nke ọma ma hazie ya ka ọ bụrụ uru asọmpi ọhụrụ. 3D ebi akwụkwọ technology nwere ike mfe mgbagwoju usoro nhazi. Dabere na data akụkụ atọ, enwere ike nweta ngwaahịa ahụ ngwa ngwa na obere oge. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere usoro ịkpụ akpụkpọ ụkwụ ọdịnala, ọ nwere ọgụgụ isi, akpaka, nchekwa ọrụ, ịrụ ọrụ nke ọma, zie ezi. Site n'iji nwayọ nwayọ pụta nke teknụzụ na akụrụngwa, anyị ga-aga n'ihu na-arụsi ọrụ ike ịchọpụta ohere ndị ọzọ na ọkwa ngwa.
Ọhụrụ mmụta maka ụmụ akwụkwọ ịzụlite ikike nke ọgbọ na-eji 3D ebi akwụkwọ technology, mgbe ike ụmụ akwụkwọ 'okike na nkà mmụta sayensị mmuta
Ngosipụta nke teknụzụ obibi akwụkwọ 3D nke ọdịbendị na okike ga-eweta nnukwu mgbanwe na nhazi na mmepe nke ngwaahịa ọdịbendị na nke okike, ọ ga-ewetakwa ohere mmepe ọhụụ. Ọ na-emebi ókè dị n'etiti ndị na-emepụta ihe na ndị na-azụ ahịa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile nwere ike ịbụ onye nrụpụta na onye nrụpụta. 3D obibi na-enye ndị mmadụ ike imepụta, na-ewepụta ihe okike nke ndị ọrụ ọ bụla, na-agbanwe ihe ùgwù nke naanị mmadụ ole na ole n'oge gara aga na-echepụta ma na -emepụta, ma na-achọpụta echiche imewe ahaziri iche na nkọwapụta nke mkpa nke ndị mmadụ nkịtị, wee mezue n'ezie ihe okike nke ndi mmadu nile. 3D mbipụta akwụkwọ na-enyere amamihe a aka ịba ụba ma jiri ya rụọ ọrụ, ma kwalite nkwupụta okike nke ngwaahịa ngwaahịa sitere na ọdịnala iji gosipụta ọtụtụ ụdị, ewu ewu na mmesapụ aka.
Printeddị ụkpụrụ ụlọ edere nke 3D bụ obere ihe na-egosipụta ntụkwasị obi nke ụkpụrụ ụlọ, na-ekwupụta echiche pụrụ iche nke ụdị ọ bụla, ọ bụghị naanị na-enyere onye ahịa aka inweta ụdị zuru ezu nke atụmatụ a chọrọ, kamakwa ọ nwere ike ịbụ obere , ọsọ ọsọ na nke ziri ezi. Emere ihe eji emebe ihe ahụ, wee mepụta ụdị ọmarịcha usoro iji gosipụta nkọwa zuru oke na obere nkọwa.
Itinye 3D ebi akwụkwọ technology ka nnyocha na mmepe usoro nke na akpaaka akụkụ nwere ike ngwa ngwa nyochaa na-arụ ọrụ ụkpụrụ na feasibility nke mgbagwoju akụkụ, nke ọ bụghị nanị na-azọpụta usoro nke ebu development, ma na-ebelata oge na ego ego. Usoro nyocha na mmepe nke akụkụ akpaaka ọdịnala na-abụkarị ihe karịrị ụbọchị 45, ebe mbipụta 3D nwere ike mezue mmepe na nyocha usoro nke akụkụ na ụbọchị 1-7, nke nwere ike ime ka nyocha na mmepe mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ dịkwuo mma. Ọzọkwa, ọ dịghị ebu a chọrọ na usoro nke akụkụ mmepe site na mbipụta 3D, nke nwere ike ịchekwa ọtụtụ ego. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji mbipụta 3D eme ihe na R&D ụgbọala na mmepụta ikpe nke akụkụ na akụrụngwa gụnyere grilles ụgbọala, dashboard ụgbọala, ọkpọkọ ikuku, ihe ngosi oriri, mkpuchi igwe, akụkụ ịchọ mma, ọkụ ụgbọ ala, taya ụgbọ ala, wdg.
Teknụzụ obibi akwụkwọ 3D na-enye ụzọ eji emepụta ọhụụ na usoro mmepụta maka mpaghara nrụpụta dị iche iche, mgbanwe ọhụrụ nke ihe a kpatara na-eji nke nta nke nta aghọ isiokwu dị ọkụ nke uche ndị mmadụ. Site na ntinye miri emi nke usoro okike obibi akwụkwọ 3D, a ga-akpali nkà mmụta sayensị iji mepụta ụdị na asụsụ ọhụrụ, na-adabere na kọmputa dị ka ikpo okwu maka okike, nke dị mma iji kwalite mmepụta ụlọ ọrụ na mmepe.
Na mmepe ngwa ngwa nke teknụzụ obibi akwụkwọ 3D, yana ngwa nke teknụzụ kọmputa, usoro nhazi na usoro nhazi nke nkenke nkenke, na imepụta na n'ichepụta nrụgide na-akpụzi, ịkpụzi wax wax, ịkpụ akpụ, isi nrụpụta, wdg. eji maka mmepụta nkenke oge ọgbụgba. Nke wetara mgbanwe dị ukwuu. The nnukwu uru nke 3D ebi akwụkwọ maka nkenke mgbatị bụ nnukwu akụkụ ziri ezi na elu imecha, otú machining ọrụ nwere ike belata. Naanị hapụ obere ntinye ọrụ na akụkụ nwere ihe ndị ka elu, ma ọ bụ ọbụlagodi ụfọdụ ọgbụgba. A ga-eji egweri ego na ịchachachacha ihe na enweghị nhazi. Enwere ike ịhụ na usoro mgbatị itinye ego nwere ike ịchekwa ọtụtụ akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa yana nhazi awa-mmadụ, chekwaa ngwa ọrụ igwe, ma nwee mmekọrịta gburugburu ebe obibi.
Ihe eji eme ihe bu uzo mbu iji gosiputa ma o nwere ike meputa ngwa ahia site na ime ihe nlele tupu emeputa ihe. A na-eji ya ịlele ma ngwaahịa ahụ zutere ihe achọrọ. Ihe puru iche nke ihe npuputa 3D nke bu ihe ngbaputa bu na o puru iweputa ihe obula site na ihe omuma ihe omuma nke komputa na adighi nma ma obu ihe obula, si otú a me ka usoro mmepe mmepe di nkpirikpi, megharia mmeputa ma belata mmeputa mmeputa. E jiri ya tụnyere teknụzụ ọdịnala, a na-ebelata ụgwọ site na ịhapụ usoro mmepụta, ihe mkpofu nke ihe onwunwe na-ebelata nke ukwuu.
Adreesị:Nke 1177, Chunlan Road, Jinan, China
Ekwentị:+86 531 55664685